Shane Nhema Tweet ine 'Iyo Predator' Fans Inotamba "Ini Spy" - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Shane Nhema Tweet ine 'Iyo Predator' Fans Inotamba "Ini Spy"
Shane Nhema Tweet ine 'Iyo Predator' Fans Inotamba "Ini Spy"
yakanyorwa na Eric Panico April 2, 2018
Munyori / Director Shane Nhema vakangotumira mufananidzo pa Twitter kuseka kwake kwakanyanya kutarisirwa The Predator! Asi usanyanya kufara zvakadaro. Mufananidzo wacho unoratidza chimiro chakasvibira chemasango, icho, pakuona kwekutanga, chinoita sechisina hupenyu. Nekudaro, izvo hazvireve kuti Predator haasi kuvanda pachena.
Unogona here kuona chero chinhu pamufananidzo?
Shhhh…. Ari kuuya. pic.twitter.com/iaQty5wy3Y
- Shane Nhema (@BonafideBlack) March 30, 2018
Kufanana nemubereki anoronga Easter mazai ekuvhima paZuva raApril Mapenzi, Nhema dzinogona kunge dziine vateveri vachikwenya bhurasho vachitsvaga chimwe chinhu chingangodaro chisipo. Mufananidzo wacho une hutsinye uye hunyanzvi panguva imwe chete. Iko kunofanirwa kuve nevazhinji vanofara mafeni kunze uko vachizendamira mukati mavo monitors, uye vachiswededza mukati kune ese mativi masendimita emufananidzo.
Tsananguro yeiyo firimu kusvika parizvino yatambidzwa padyo nepachipfuva, asi usarega kushaikwa kwezvinhu zvekushambadzira kuchikunetsa. Shane Nhema anga aine franchise kubva pakutanga, achitamba chinzvimbo chaHawkins mufirimu rekutanga. Chake kunyora / kunongedza filmography mune yekuita genre inozvitaurira yega ne Lethal Weapon mafirimu, Iron Man 3, uye Vakanaka Vakomana. Iye anoziva kunyora makuru mavara, firimu yekufungidzira zviito zvinoteedzana, uye kusanganisa zvishoma rima kuseka munyaya dzake. Semunhu anofa-zvakaoma fan yefirimu rekutanga, ndinofunga kuti rakateedzana riri mumaoko akanaka.
Isu nguva pfupi yadarika takadzidza kubva kumubati-munyori Fred Dekker kuti iyo sequel parizvino iri kupfuura reshoots, asi trailer tirera inofanira kutumirwa munguva pfupi. Zuva rekuburitsa parizvino rakagadzirirwa Nyamavhuvhu 14, 2018.
Panguva ino, ndinofunga ndinotaura kune vese vateveri kana ndati, "ENDA KUTRAILA!"
Uri kufara The Predator? Ive neshuwa yekutumira mune zvakataurwa kana iwe uchifunga iwe kuti uone chimwe chinhu mupikicha Shane Nhema Tweeted! Kutanga kuwana chimwe chinhu i "sex tyrannosaurus!"
chikarachikara fotoShane Nhemashane mutema chikarashane nhema tweetshane nhema twitterThe Predatoriyo mhuka yechikaraiyo mhuka inoparadza
'Yechokwadi Detective' Mwaka 3 Inorasikirwa 'Green Kamuri' Director
James Wan, naRoy Lee Vakagadzirira Kugadzira 'Iyo Tommyknockers'